'साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार' संवाद; उमङ्ग | साहित्यपोस्ट
मेरो लघुकथा उमङ्गले साहित्यपोस्टले आयोजना गरेको लघुकथा प्रतियोगिताको आठौँ चरणको प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेको थियो । त्यही खुसीमा सिङ्गो कृतिको नाम नै उमङ्ग जुरेको हो । - सत्या अधिकारी
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित १८ जेष्ठ २०७९ १८:०१
२०७७ सालमा, साहित्यपोस्टको संयोजन तथा क्रान्तिकारी नेतृ योगमायाका अध्येता उत्तमप्रसाद पन्तको सौजन्यमा स्थापित “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार– २०७८”का लागि ११ पुस्तकहरूको छनौट भइसइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोत्कृष्ट एक कृतिको घोषणा गर्नुअघि उत्कृष्ट एघार कृतिका स्रष्टाहरूसँग पुरस्कारकै पेरिफेरिमा रहेर संवाद गरिएको छ । यस संवादको मुख्य उदेश्य भनेको “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”लाई लिएर उहाँहरूको विचार जान्नु र कृतिको बारेमा पाठकलाई लेखकबाटै थाहा दिनु हो ।
यहाँ उत्कृष्ट एघारमा छनोट भएको लघुकथासङ्ग्रह ‘उमङ्ग‘का स्रष्टा सत्या अधिकारीसँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईंको पहिलो लघुकथा कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि उत्कृष्ट पुस्तकको सूचीमा पर्न सफल भयो । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
नेपालमा साहित्य उत्थानको लागि नयाँ लेखकलाई प्रोत्साहन गर्न चाल्नुभएको यो कदमलाई दुबै हात जोडेर नमन गर्दछु । गत वर्ष मेरो लघुकथा उमङ्गले साहित्यपोस्टले आयोजना गरेको लघुकथा प्रतियोगिताको आठौँ चरणको प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेको थियो । त्यही खुसीमा सिङ्गो कृतिको नाम नै उमङ्ग जुरेको हो । आज यही कृति फेरि पनि उत्तम कृति पुरस्कारको लागि छनोटमा परेको छ । मलाई धेरै खुसी लागेको छ । साहित्यपोस्टले मलाई यो खुसीमाथि खुसी प्रदान गरेकोमा फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारका लागि ११ कृति छनोट भएका छन् । अर्थात तपाईंको प्रतिस्पर्धीका रुपमा बलिया कृतिहरु छन् ।तपाईंले पुरस्कार जित्नु वा नजित्नुले तपाईंको साहित्यिक यात्रामा के अर्थ राख्छ?
मेरो कृति अवार्डमा पर्नुभनेको पक्कै पनि अग्रजहरुले कृतिलाई माया गरिदिनु भएको हो भन्ने ठान्दछु । छनोटमा परेका कृतिहरु बलिया अवस्य छन् । तर विधागत रुपमा फरक पनि छन् । सबैका आ-आफ्नै विशेषताले आज उत्तम कृतिमा परेका छन् । तिनै भिन्न विशेषताभित्रको मेरो लघुकथा सङ्ग्रहले पुरस्कार जित्नेमा म आशावादी छु । जित्दाखेरि कुनै पनि स्रष्ठाको उत्साह र प्रेरणामा ठूलो भूमिका खेल्दछ । तर हार्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन । निरन्तर कलम चलाइराख्ने छु । मेरो कृति छनोटमा पर्नुले मलाई लघुकथा लेखनमा थप उर्जा प्रदान गरेको छ । यसले मेरो लघुकथा लेखनमा निरन्तर अगाडि बढ्ने हौसला दिएको छ र दिइरहनेमा विश्वस्त छु।
उमङ्गमा सङ्ग्रहित लघुकथाहरूले के-कस्ता विषयवस्तु र अनुभूतिहरू समेटिएका छन् ?
‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’ संवाद; निती
साहित्यपोस्ट	 २९ जेष्ठ २०७९ १९:०१
साहित्यपोस्ट	 २४ जेष्ठ २०७९ १९:०१
‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’ संवाद; गीतामा…
साहित्यपोस्ट	 २० जेष्ठ २०७९ १७:०१
यो सङ्ग्रहमा मैले मेरो बाल्यकालदेखि अनुभव गर्दै आएका कुरालाई कथामा समेटेको छु । मेरो घरभित्रदेखि टोल, समाज र आफूले काम गर्ने कार्यस्थलसम्मका कहानी पस्केको छु । आफ्नै आँखाले देखेका, भोगेका र सुनेका घटनाहरूलाई टपक्क टिपेर लघुकथाको मालामा उनेको छु । समाजमा घटेका घटनाहरूलाई कथाको माध्यमबाट उजागर गरेको छु । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजमा हुने सामाजिक विभेद, शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक विसङ्गतिलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।
पहिलो कृतिमार्फत आफूलाई किन लघुकथाकारको रूपमा उभ्याउनु भयो ?
हुन त म सानैदेखि कथा, कविता भनेपछि हुरुक्क हुन्थेँ र लेख्थें पनि । पछि राजु छेत्री अपुरोको ‘दिमागको बिर्को’ लघुकथासङ्ग्रहभित्रका कथाहरू पढेँ । छोटा तर नुन, अमिलो र पिरो ठिक्क भएको चटनीजस्ता कथा साह्रै मन पर्यो । त्यसपछि संयोगले हाम्रो लघुकथा पाठशालाको अनलाइन पेजमा जोडिएँ । त्यसपछि लघुकथा पढ्ने र लेख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन थालेँ । अहिलेको यो व्यस्त समयमा सिङ्गो उपन्यास, कथा, जीवनी पढ्न छुट्टै समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ । लघुकथा हामीले एक बसाईमै पढ्न सकिन्छ । छोटा छोटा कथामा विशाल सन्देश बोकेका लघुकथा पढ्नुको मज्जा छुट्टै हुन्छ । लघुकथाको विशेषता बिन्दुमा सिन्धु अटाउने खालका हुने हुनाले गहन विषयलाई पनि छोटो रूपमा कथाको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिने हुँदा मेरो रुचि लघुकथातिर बढ्दै गएको हो । यसकै परिणाम आज म लघुकथाकारको रूपमा चिनिएको छु ।
उमङ्गले पुरस्कार पायो भने आर्थिक राशि ले के गर्नुहुन्छ?
साहित्यपोस्टले पुरस्कार बापत राखेको यो रकम राम्रो रकम हो । यसले नेपालको साहित्य प्रवर्द्धनमा पक्कै पनि ठूलो टेवा मिल्ने छ । मैले अहिले नै पुरस्कारको बारेमा खासै केही सोचेको छैन । यदि पुरस्कार हात लाग्यो भने उक्त रकम पक्कै पनि सिर्जनात्मक कार्य, साहित्य सिर्जना र समाज सेवामा लगाएर सदुपयोग गर्नेछु ।
अन्त्यमा भविष्यको साहित्यिक यात्राको योजनाहरु के के छन् ?
साहित्यपोस्टले गर्दै आएका विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा विजयी भएर मलाई लघुकथा लेखनमा उर्जा थपेको हो । आज फेरि मेरो पहिलो कृति उमङ्ग पुरस्कारको लागि छनोटमा पर्नुले झनै उर्जावान् भएको महसुस गरेकी छु । उमङ्गपछि दोस्रो कृति पनि प्रकाशनको लगभग तयारी अवस्थामा छ । मेरा भविष्यका योजना भन्नु नै साहित्य अध्ययन र लेखन हो । लघुकथा लेखेर नथाकुन्जेल लेखिरहने छु । आँखाले पढ्न सकेसम्म पढिरहने छु । साहित्यको पनि खासगरी लघुकथाप्रतिको अविरल यात्रा नै हुनेछ मेरो भविष्य ।
सत्या अधिकारीसाहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार